Turkiga oo soo bandhigay ciidan ay dhulka iyo badda isku mid u yihiin? - Muraayad
Home Nolosha Turkiga oo soo bandhigay ciidan ay dhulka iyo badda isku mid u...
Turkiga oo soo bandhigay ciidan ay dhulka iyo badda isku mid u yihiin?
Ciidan dhulka iyo badda isku mid uga howl gala | Image Credit Anadolu Agency
Sanadihii lasoo dhaafay Turkiga wuxuu xoog saaray xoojinta awooddiisa militari.
6-dii bishan April waxaa Turkiga lagu soo bandhigay cutub ka tirsan ciidan lagu magacaabo Amphibious (kuwa ka howl galaya badda iyo barriga) oo ku tababaranaya magaalada Izmar ee waddankaas.
Ciidankan mariiniska ah oo sawirrada laga soo qaaday ay muujinayaan in ay xirfaddoodu aad u sarreyso ayaa la sheegay in marka howlgal loo diro ay isku mid u yihiin biyaha dhexdooda iyo dhulka labadaba, sida ay shaacisay Wakaaladda Wararka Turkiga ee Anadolu.
Dowladda Turkiga ayaa sheegtay in ciidanka loogu talogalay inay fuliyaan howlo muhiim ah oo la xiriira dagaalka ka dhanka ah kooxaha loogu yeero argagixisada ee gudaha iyo dibaddaba.
Ciidankan ayaa fulin kara howl gallo gudaha iyo dibaddaba ah | Anadoulu Agency
Waxaa intaas sii dheer in ciidankan ay xirfad aad u sarreysa u leeyihiin shiishka toogashada meelaha fog fog ayna diyaar u yihiin shaqo kasta oo adag.
“Waqti walba ayay u diyaarsan yihiin inay aadaan howlgal nooc kasta ah oo ka dhaca meel kasta,” ayaa lagu yidhi warka lagu soo qoray Wakaaladda.
Qalabka ay heystaan ayaa isugu gaadiidka taangiyada iyo maraakiibta dheereeya iyo waliba diyaaradaha qumaatiga u kaca ee loo yaqaanno helicopters.
Waxay ciidankan xeelad fiican u leeyihiin toogashada | Anadolu Agency
Ciidanka loo yaqaanno Amphibious ayaa horay waddamo ka mid ah caalamka looga adeegsan jiray, waxaana ay shaqadoodu ahaan jirtay in ay iyagoo badda kasoo duulaya weerarrada ka fuliyaan xeebta u dhow biyaha.
Sidoo kale waxy ciidamada gurmadka ah u soo daad gureyn jireen aagagga badda ee uu dagaalku ka socdo. Hase yeeshee Turkiga ayaa wax ka baddalay tababarkooda, waxaana uu sheegay in ay barriga iyo baddaba xirfad isku mid ah u leeyihiin.
Markii ugu horreysay ee ciidanka noocan ah lagu arko caalamka waxaa lasoo shir tagay dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka sanadihii 1930-meeyadii.
Cutubyada ka tirsanaa ciidanka Ingiriiska ee noocan ah ayaa loo xil saari jiray inay gacan ka geystaan howlgallada badda, dhulka iyo cirka intaba.
Previous articleNinkii Bambo uu caano ka dhigay ku qarxiyay markab
Next article4 arrimood oo muhiim kuu ah inta ay socoto bisha Ramadaan